Sida loo Play AVI on Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah iyadoo wax dhibaato ah
Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah ma taageeraan loo maqli karo ee files AVI? Waa adag tahay in la sheego sababtoo ah inkastoo qaab tani waxaa ku qoran mid ka mid ah qaabab file video socon, waxaad sidoo kale dhici karta in arrinta loo maqli karo oo dhan. Waxaa si weyn lagu talinayaa in aad naftaada iyo milkiilayaasha Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah wax kasta oo ay ka jiraan in ay isticmaalaan server warbaahinta in ay ka fogaadaan wax kasta oo niyad.
Waxaa jira hab fudud oo kaa caawinaya inaad shaqo taas loo sameeyo. Uma baahnid in aad si aad u barato oo ku saabsan codec u adag oo mana aad u baahan tahay si ay u dejiyaan kala duwan video ama audio koobin. The Wondershare Video Converter Ultimate ku siinayaa jidkii toos ah u qulquli files AVI in Console ah, si aad si fudud oo dhaqso ku raaxaysan karaan faylasha AVI aad si loo hubiyo in loo maqli karo si fudud.
Taageerada ku dhowaad dhammaan noocyada kala duwan ee ay ku jiraan qaabab video AVCHD, XVID, MKV, MOV iyo wax ka badan.
Waxaa la dhisay-in server warbaahinta u saamaxaaya in aad si toos ah u sii qulquli files AVI in Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah.
Editor Easy in la isticmaalo wuxuu bixiyaa 300+ Hababka iyo saamaynta audio ama muuqaal.
Samaynta, Iyo La gubi DVD ama badalo si image file ISO ah.
Tallaabo 1: Ku dar files gal barnaamijka
First of dhan, aad u hesho files AVI deegaanka ka dibna si toos ah kuwaa oo u gal Murayaad diinta barnaamijkan ee. Dhammaan files uploaded ka dibna waxaa lagu soo bandhigi doonaa interface sida lagu muujiyay in shaashadda hoose. Habka kale oo aad isticmaali kartaa in aad ku darto files waa in guji Add Faylal ay kasoo dajiyaan files AVI ah.
Talaabada 2: Dooro Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah sida qalab geeyo ee
Hubi in Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah iyo PC waa in network isla, si software si toos ah lagu ogaan karaa in aad Madaxweyne Siilaanyo oo aad u heli karaa liiska geeyo ka. Halkan kaliya tagaan "Stream" tab, doortaan Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah, oo ka dhacay Stream ee geeska gacanta midig hoose ee suuqa.
Markaas server webigu ku arbushin doonaa si aad u bilowdo nidaamka geeyo ka. Ka dul video aad rabto in aad sii qulquli, iyo riix "Play To TV" badhanka - aad isla markiiba ku raaxaysan kartaa video shaashadda weyn. Ka dib markii in, xakamayn karto loo maqli karo isla markiiba daaqad gacanta aad - qabsato mugga ama ku boodaan si ay u dhacdo kale.
Sida loo Download Movieclips Video Click in a
> Resource > Video > Sida loo Play AVI on Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah